RW Xasan Cali Kheyre oo kulamo gaar ah kula qaatay Dhuusamareeb Waxgaradka Galmudug, Muxuuse u sheegay? | HalQaran.com
RW Xasan Cali Kheyre oo kulamo gaar ah kula qaatay Dhuusamareeb Waxgaradka Galmudug, Muxuuse u sheegay?
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud isaga oo kulan wadatashi ah la yeeshay wakiillada qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool maamulka Galmudug.
Xasan Cali Kheyre oo shalay galinkii dambe gaaray Dhuusamarreeb ayaa la filayaa in uu furo shirweynaha dib u heshiisinta GalMudug oo loo madlanyahay berri oo Arbaco ah uu ka furmo Dhuusamareeb sida uu Isniintii ku dhawaaqay Wasiirka Arrimaha Gudaha Dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Sabriye.
Shirweynaha beelaha Galmudug oo ay ku kulansanyihiin siyaasiyiin, aqoonyahanno, odayaasha dhaqanka iyo guud ahaan waxgaradka Galmudug ayaa looga arrinsanayaa dhismaha maamul loo dhanyahay oo ay yeeshaan dadka Galmudug.
Ergada ka qeybgalaysa shirka ayaa looga fadhiyaa turxaan bixinta madmadowga siyaasadeed ee ka jira gobolka iyo baahinta hannaanka dowladnimo.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa oo dhawaan socdaal wakhti badan qaatay ku tagay Galmudug ayaa qaaday tallaabooyin muhim u ah horusocodka geediga dowladnimada oo ay ugu horreyso in uu heshiis la gaaray wadaaddada Ahlusunna ee ku sugan qeybo ka mid ah Galmudg iyada oo ay suuragashay in maleeshiyaadkii ka amar qaadan jiray ay haatan kusoo wareegeen gacanta dowladda.
Galmudug ayaa laga dareemayaa horumar siyaasadeed oo ay garwadeen ka tahay dowladda Soomaaliya kaas oo la filayo in bulshada gobolladaas uu u horseedo is afgarad dhan walba leh.
Ra'iisul wasaare Xasan Cali